विदेशबाट दसैँ मनाउन फर्किँदै हुनुहुन्छ ? सामान ल्याउनुअघि यी कुरामा ध्यान दिनुहाेस्
वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत तथा विदेशमा बस्दै आएका नेपाली दसैँतिहार मनाउन स्वदेश फर्किने क्रम सुरु भएको छ । दसैँतिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकैसँगै नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशीबाट फर्किनेहरूको भीडभाड बढ्न थालेको छ ।
सरकारले विदेशबाट आउँदा सबै सामान ल्याउन नदिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको ‘झिटीगुन्टा आदेश’ अनुसार मात्रै समान ल्याउँदा नेपालमा समस्या नहुने विमानस्थलअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका नेपालीले सामान साथमा लिएर आउँदा भन्सारका बारेमा जानकार नहुँदा उनीहरू विमानस्थलमा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विदेशबाट सामान लिएर आउन नेपालीलाई सरकारले वस्तु तथा संख्याका आधारमा भन्सार छुटसमेत दिँदै आएको छ भने कतिपय सामानमा भने अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशबाट कुन सामान ल्याउन पाइने ? कति ल्याउन पाइने ? सामानको भन्सार शुल्क कति लाग्ने ? विषयमा विदेशमा रहेका धेरै नेपालीलाई थाहा छैन । जसले गर्दा नेपालमा आइसकेपछि धेरै व्यक्ति झमेलामा फस्ने गरेका छन् । सरकारले पनि विदेशबाट यति मात्र सामान बोकेर फर्कन पाइन्छ भनेर सूचनामार्फत स्वदेश फर्किने नेपालीलाई सूचित गराउन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपाली दसैँतिहारमा स्वदेश फर्किँदा आफन्त तथा साथीभाइका लागि भन्दै महँगो ब्रान्डको रक्सीसहित टीभी, मोबाइल फोन, ल्यापटप, सुनचाँदीका गहनालगायतका सामग्री बोकेर आउँछन् ।
त्यस्तै, एकभन्दा बढी टीभी भन्सार तिरेरै पनि ल्याउन नपाइने व्यवस्था सरकारको छ । यस्ता समानमा समदरमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्छ । साथै, विदेशमा काम गरेर फर्किएकालाई दुई थानसम्म नयाँ मोबाइल ल्याउँदा भन्सार लाग्दैन । साथमा एउटा बोकेर आउन पाइन्छ । त्योभन्दा बढी ल्याए बजार भाउअनुसार भन्सार लाग्छ ।
यसैगरी निश्चित परिमाणमा लुगाफाटा, बिछ्यौनालगायत घरायसी उपयोग तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका विभिन्न सामग्री ल्याएमा भन्सारमा छुट दिइएको छ । तर, ठूलो परिमाणमा भने बोकेर ल्याउन पाइँदैन । यदि ती सामान ल्याएमा किलाेका दरले भन्सार तिर्नुपर्छ ।
सुनका गहना ल्याउँदा ५० ग्रामसम्मको भन्सार शुल्क लाग्दैन । ५० देखि सय ग्रामसम्मको प्रति १० ग्रामको ५ हजार २ देखि सय ग्रामसम्मको प्रति १० ग्रामको ६ हजार २ सय रुपैयाँ, १ सय ५० देखि २ सय ग्रामसम्मको प्रति १० ग्राम ७ हजार २ सय तथा २ सयदेखि २ सय ५० ग्रामसम्मको प्रति १० ग्राम ९ हजार २ सय रुपैयाँ भन्सार पर्ने झिटीगुन्टामा उल्लेख छ ।
विदेशबाट फर्किँदा यी विषयमा जानकारी नै नलिई समान बोकेर आउँदा कतिपय व्यक्ति विमानस्थलमा समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २, २०७७, २०:३९:००